Jeon So-yeon (Kuuriya: 전소연; wuxuu dhashay Agoosto 26, 1998), oo si wanaagsan loogu yaqaanay magaca Soyeon, waa fanaa Koonfur Kuuriya la saxeexan Kube Entertainment. Waxay heshay dareenka ah inay ku tartamto barnaamijyada telefishanka ee ay soo saaraan Produce 101 iyo Unpretty Rapstar, markay ahayd Noofambar 5, 2017 waxay noqotay hees fanaa, markii dambena xubin ayey ka noqotay kooxda gabdhaha (G)I-dle bishii Maajo 2018.
Soyeon ee Marie Claire Korea 2021
(1998-08-26) Agoosto 26, 1998 ( 23jir)
duubista soo saare
Jeon So-yeon wuxuu ku dhashay Agoosto 26, 1998, magaalada Seoul, Koonfur Kuuriya. Jeon wuxuu bartay ballet markii uu ahaa cunug, gelitaanka iyo ku guuleysiga tartamo badan. Kadib markii uu arkay Big Bang oo sameynaya, Jeon wuxuu joojiyay boodhka si uu u barto mihnad muusig. Jeon wuxuu kaqaybgalay 20-30 xisaab-celin maalmeedkeedii dugsiga hoose, laakiin ma uusan gudbin midkoodna.
Jeon wuxuu markii dambe go’aansaday inuu raacdeeyo kufsashada. Waxay aakhirkii soo aruurisay geesinimada si ay ugu kufsato khudbadaha, taas oo u horseeday in la dareemo oo ay bilawdo in ay ka hesho wicitaanada meelo kala duwan. Iyada oo jihayntooda muusikada ay ka duwan tahay tii hore, waxay go aansatay inay iska dayso riyadeedii ahayd inay fanaan noqoto inyar oo ay qaaddo qoob-ka-ciyaarka, taas oo ay ku riyaaqday markii ay ahayd cunug ahaan. Waxay ahayd markaa nolosha nolosheeda qoob-ka-ciyaarka ayaa bilaabatay.
Kadib markay aragtay qoraalkii xisaabiyaha ee Cube Entertainment ee 2014, waxay go aansatay inay mar labaad xisaab-hubin sameyso waxaana lagu doortay hoolka xisaabinta ee lagu qabtay Incheon. Kadib markii uu gudbay wareegii ugu dambeeyay ee garsoorka, Jeon wuxuu noqday tababarte Cube Entertainment.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeon_So-yeon&oldid=214243"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Agoosto 2021, marka ee eheed 18:23.